Ubutofotofo obunendawo yokulala enamagumbi amabini anendawo yangasese
Iinkcukacha zoqobo ze-rustic zidibana nobunewunewu bale mihla kolu luhlu lutshanje olugqityiweyo lweebhanti ezisi-8 zokuziphekela. Ibekwe kwindawo ebukekayo yaseCambridgeshire, iishedi zethu ezixhotyiswe ngokupheleleyo zilungele ikhefu elifutshane okanye ukuphumla ixesha elide.
Baleka kuxinzelelo lobomi ukuya kwikhefu lothando, okanye njengesiseko sobunewunewu apho ungajonga khona ezona ndawo zinomtsalane eMpuma yeNgilani.
Nceda uqaphele ukuba asikwazi ukufumana ii-BBQs.
Ezi zindlu zibonelela ngendawo yokuhlala evulekileyo kunye neyomoya evulekileyo, enekhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, itafile yokutyela kunye negumbi lokuhlala elitofotofo. Igumbi elinye lokulala elinesibini kunye nelinye
Iingcango zaseFransi zivuleleka kwi-terrace yangasese.
Inkosi enkulu kunye negumbi lokulala elinye labelana ngegumbi lokuhlambela elibekwe kakuhle kunye neshawari yokuhamba.
5* umgangatho weebhedi zeHypnos ezenziwe nge-200 intambo yelinen yebhedi yomqhaphu yase-Egypt
600 intambo ukubala iitawuli zodidi
I-Smart TV ikwindawo yokuhlala kunye negumbi lokulala
Izinto zangasese ezitofotofo
Abaphathi bazisola ngokuba amaqela enkukhu namaxhama akanako ukuhlaliswa kwiFama yasePringle.
Ngokuxhomekeke kwindlela yakho yokubhukisha, unokuqhagamshelwa liqela logcino ukuze uqokelele iinkcukacha zekhadi kwidiphozithi yokhuseleko, njengoko amanye amaqonga okubhukisha akakwazi ukuqokelela iidipozithi egameni lenginginya. Konke ukubhukisha kuxhomekeke kwidiphozithi yokhuseleko eyi-£80. Ukubhukishwa kweepropathi ezininzi oku konyuswa ukuya kwi-£100 ngeshedi nganye.
Ngoku siyakwazi ukuthatha iidiphozithi zokubhukisha kunye nezinye iintlawulo sisebenzisa iiTransfers zeBhanki; ukuba ungathanda ukubhukisha kwaye uhlawule ngekhadi letyala, nceda ufowunele 07741 005634 ngamaxesha omsebenzi.
Ibekwe kwilali yemveli kumaphandle amahle aseCambridgeshire, iYadi @ Pringle Ifama ikwindawo yokufikelela kweyona ndawo intle yaseNgilani, kubandakanya iCambridge, Ely, Peterborough kunye neeFens.
Ilungele ukubonwa kunye nesiseko esihle sokusebenza kude nekhaya kwamanye amashishini anomdla azinze kulo mmandla, ifama yasePringle inokufikelela ngokulula kuthungelwano lwemoto yethu.
Ezi zishedi zinobunewunewu zibuyiselwe ngothando, zidibanisa izinto zokuqala ze-rustic kunye nempahla yangoku kunye nekhaya.
Yonke into enye yokuguqulwa iye yajongwa buqu ngabanini ukuqinisekisa ukuba iyahlangabezana nemigangatho ephezulu elindelwe ngabatyeleli abaqaphelayo.
Abaphathi bazisola ngokuba amaqela exhama kunye neenkukhu akanakuhlaliswa kwiFama yasePringle.
Ngokuxhomekeke kwindlela yakho yokubhukisha, unokuqhagamshelwa liqela logcino ukuze uqokelele iinkcukacha zekhadi kwidipozithi yokhuseleko njengoko amanye amaqonga okubhukisha akakwazi ukuqokelela iidipozithi egameni lenginginya. Konke ukubhukisha kuxhomekeke kwidiphozithi yokhuseleko eyi-£80. Ukubhukishwa kwee-cottages ezininzi oku kunyuswa ukuya kwi-£ 100 kwi-barn nganye.
Yonke into enye yokuguqulwa iye yajongwa buq…